10 zvikonzero zvekushandisa risingaremer desktop | Linux Vakapindwa muropa
azpe | | Desks
Sezvo isu tese tatoziva, kune mhando mbiri dzematafura mune linux pasirese, yakajairika desktop uye isina huremu desktop. Seizvo zita rayo rinoratidza, desktop isingaremi idesktop inoshandisa zviwanikwa zvishoma yeiyo system pane desktop inowanzo shandisa.
Pakati peakanyanya kuzivikanwa ematafura ematafura tinogona kuwana LXDE, Xfce uye MATE pakati pevamwe. Nguva zhinji aya madhesiki anouya akafanogadzwa mune kumwe kuzivikanwa kunozivikanwa uye dzimwe nguva tichafanira kurodha pasi nekuzviisa isu pachedu.
Kufunga pakati pebhureki rakareruka uye dhesiki rakajairika chisarudzo chakaomarara chevashandisi vazhinji. Kuti ubvise kusahadzika kwako, ndiri kuzokupa zvikonzero gumi zvekushandisa desktop isingaremi muLinux.
1 Iyo isina kurema desktop inogona kushanda pamakomputa ekare
2 Tinogona kushandisa zviwanikwa zvedu kune mamwe mabasa
3 Lower magetsi uye bhatiri kushandiswa
4 Kumhanya kwakakwirira
5 Nyore mhinduro yeWindows XP kupera kwekutsigirwa
6 Ivo vanotora nzvimbo shoma pane hard drive
7 Zvinotora nguva shoma kurodha pasi nekumisikidza ivo
8 Tinogona kushandisa maCD pachinzvimbo chemaDVD
9 Kukurumidza kutanga
10 Pasina kupisa
Iyo isina kurema desktop inogona kushanda pamakomputa ekare
Mukana wekutanga wedesi risingaremi uye zvakare pachena ndewekuti inogona kushanda pamakomputa ekare. Mamwe madhesiki ivo vanokumbira zvakaderera zvakaderera zvishoma zvinodiwa, inomhanya pamakomputa ane isingasviki 512 megabytes eRamu. Izvi zvinoshandura mukukwanisa kununura zvishandiso zvekare zvine makore anodarika gumi uye zvinoramba zvichishanda nemazvo.
Tinogona kushandisa zviwanikwa zvedu kune mamwe mabasa
Kana isu tine komputa ine zviwanikwa zvakawanda, zvinogona zvakare kuve chinhu chakanaka kuisa yakajeka desktop. Iyo isingaremi tafura inoshandisa zviwanikwa zvishoma pane zvakajairwa, ipapo inosiya mamwe masisitimu zviwanikwa zviripo kune mamwe maapplication kana mabasa.
Lower magetsi uye bhatiri kushandiswa
Akaderera-anodikanwa madhesiki anoshandisa mashoma mwenje uye nekudaro mashoma batri simba. Izvi zviri nyore kunzwisisa, nekuti yakawanda sei zvishoma zvishandiso zvePC zvinoshandiswa, mashoma magetsi inoda kushanda.
Kana isu tanyanya kuomerera pane zviwanikwa, iyo system inozotishandira, asi isu tinotambura kudzikira kazhinji. Izvi hazviitike kwatiri nenharaunda nharaunda, nekuti nekukumbira izvo zvishoma, isu tichakwanisa kupfura nekukurumidza pamwe nechero timu.
Nyore mhinduro yeWindows XP kupera kwekutsigirwa
Kune vanhu vazhinji nemakambani zvainge zvakaoma chaizvo kuti rutsigiro rweWindows XP rwapera, kubvira vaiishandisa mumakomputa ekare kwavakatadza kuisa Windows 7 (pane kusvetuka kukuru mune zvinodikanwa pakati pe XP na7, kubva pamamegabyte makumi matanhatu kusvika pa64 GB yeRam). Izvi zvakasiya makomputa mazhinji ari munjodzi yekurwiswa, sezvo komputa isingatsigirwe isina kuchengetedzeka. Mhinduro yakanaka kune vanhu ava ndeyekushandura yavo Windows XP yeLinux desktop ine zvakaderera zvinodiwa, nekuti nenzira iyi vanozogona kushanda zvakafanana kana nekukurumidza, asi vanogara vakachengetedzwa zvakanaka.
Ivo vanotora nzvimbo shoma pane hard drive
Kuve akareruka mamiriro, ivo havangoshandisa mashoma zviwanikwa, asi zvakare ivo vanotorawo shoma nzvimbo pane yako hard drive, sezvo ivo vasina akawanda maficha kana mashandiro semadhivhuru ematafura. Izvi zvakakosha kunyanya kana isu tine makomputa ane diki diki dhisiki nzvimbo.
Zvinotora nguva shoma kurodha pasi nekumisikidza ivo
Uyu ndiwo mugumo wekutora nzvimbo shoma, nekuti nekugara zvishoma, isu ticha tora yakawanda shoma nguva yekuzvirodha pasi uye uzviise pamakomputa edu. Izvi zvakakosha kune vanhu vane inononoka internet yekubatanidza kana vasingade kumirira kwenguva refu.
Tinogona kushandisa maCD pachinzvimbo chemaDVD
Uyu ndiwo mumwe mhedzisiro yekutora nzvimbo shoma. Kunyangwe vazhinji vevanhu ngatishandise USB booting kana tichiyedza kana kuisa kwedu kwatinoda kugovera, kuchine vanhu vazhinji vanoda CD / DVD fomati. Muzviitiko zvakawanda, tichakwanisa kuisa iyo ISO yehuremu hunoshanda sisitimu pane CD, iyo inodhura pane DVD.
Nzvimbo yedesktop iyo inotora zvishoma uye inoda zviwanikwa zvishoma, zvinotora nguva shoma kutanga kumusoro pane iyo inotora nzvimbo yakawanda uye inoda zviwanikwa zvakawanda. Icho chikonzero ndechekuti iyo inoshanda sisitimu inofanirwa kutakura zvinhu zvishoma uye nekudaro ichazviita nekukurumidza.
Mhedzisiro yekupedzisira ndeyekuti isina huremu desktop unopisa komputa zvishoma. Izvi zvakanaka kana uine komputa inopisa zvakanyanya, senge HP laptop, se komputa inopisa zvakanyanya inogona kutambura kukundikana kwakakomba senge matambudziko neiyo chip chip kana iyo mamaboard. Izvi ndizvo zvinokonzerwa nekushandisa kwakaderera zviwanikwa, nekuti nekuda kushomeka kwekuita, komputa hainyanye kupisa zvakanyanya.
Pakupedzisira ndikuudze izvozvo ichi chinyorwa hachifanirwe kusanzwisiswa. Hatisi kureva kuti yakajairika desktop iri yakaipa, asi kuti mune zvimwe zviitiko, zvirinani kushandisa risingaremer desktop.
Kana isu tine komputa ye 16 Gigs yeRam, 2 teras yedhisiki rakaomarara ine 128 SSD uye 8-core processor padhuze ne fiber optic kubatana, isu hatizotaure mutsauko pakati pesimba risingaremi desktop neyakajairwa.
Zviri zvimwe Kana isu tikaisa isingaremi desktop pakombuta yakadaro, tiri kuzorasikirwa nezvinhu zvakawanda iyo inotipa iwo madhesiki akajairwa sePlasma kana Gnome (yavo aesthetics, kwavo kunyorera, kuita kwavo ...).
Ndokusaka chinyorwa ichi Inotarisirwa kune vanhu vane timu yakajairika, iyo yaizoshanda zvirinani pane isina kurema desktop pane yakajairwa imwe
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » 10 zvikonzero zvekushandisa isingaremi desktop
Ricardo Esteban (@chiribe) akadaro
Chaizvoizvo? Pakati pa2016?
Pindura kuna Ricardo Esteban (@chiribe)
Walter Omar Dari akadaro
Pamusoro apa pane vashandisi vazhinji vane midziyo ine mwero kwazvo, mumamiriro ezvinhu anosarudza paGNU / Linux tinovaisira LXDE kana XFCE yavo.
Pamichina mitsva, zvakananga KDE.
Pindura kuna Walter Omar Dari
Muvhuro wapfuura, ndisati ndatora shamwari yakaputsika palaptop ku "green dot", ndakatora 2GB RAM yaaive akatakura ndokuiisa mu "relic" iyo ingangoita makore gumi ekuberekwa uye kuti hapana munhu aida (neiyo 10MB iyo yaive nayo kubva fekitori yacho yainonoka kunyangwe naLubuntu).
Iyo "relic" ine 2GB mushure mekuisa antiX (http://antix.mepis.org) inoenda sepfuti (kunyora zvinyorwa neLibreOffice, kufamba, tsamba ...). Iye zvino vana vangu vane komputa inoshandiswa.
Kuwedzera hupenyu hwemashini ekare kwakanakira homwe yako uye nharaunda. :-)
Wangu Mate akandinyadzisa zvishoma, ini ndaitarisira kuti ireruke asi pakupedzisira inoshandisa zvakanyanya kana zvishoma zvakafanana neCinnamon uye ini ndoda iyo yekupedzisira zvakanyanya.
Fabian Andres akadaro
Ndinoda kuziva mamiriro ezvinhu ari mumufananidzo uye kuti vakaita sei kuti vazvigadzirise zvakadaro sezvo ini ndine linux asi ini handizive kuti ndosvika sei kune ino gadziriso.
Sezvineiwo ini ndiri mutsva mune ino yekugadziriswa kwenzvimbo uye ini ndinogara ndichiyedza OS nemagariro anouya nekutadza.
Ndinoonga hanya yenyu yemutsa.
Pindura kuna Fabian Andres
Fabián Andrés - Unogona kusvika kune iyo gadziriso uchishandisa Lxde uye wbar ... Kana kushandisa icewm uye wbar / kana kushandisa openbox ne fbpanel uye wbar ...
Mhoroi Hi akadaro
Mhoro, chinyorwa chakanaka ndinofunga vakatondikurudzira nekuti ini ndaisada KDE PLASMA; asi ini ndoda kuziva kana ndichigona kuisa risingaremer desktop pairi ndisinga dzorese zvese, kana zvirinani kudzorera zvese.
Pindura kune hello hello
Ubuntu 14.04.5 yave kuwanikwa